Waa’ee Oromoo Mirkanii Qaabatamu – Gubirmans Publishing
Posted on March 10, 2014 by bgutema
Qabsawota Oromoo haddheessuuf araddoota Oromiyaa hedduu keessaa lama qofa, Baddannoo fi Arbaguugguu argatani. Bakkoota sanatt hamaa tolfaman jedhaman gadoodduun kun ni dhagahan malee qoratanii hin mirkaneeffanne. Ammallee eenyu akka dubbii tuqate, eenyu eenyuun akka ajjeese qaama walabaan hin mirkanoofnee. Gara Oromoon ofirrooti akka dubbii kaasanii fi lubbuu badett caalaatt abbaawummaan akka gaafataman himama. Gara hundaanuu ta’iisichi akka imaammata sadarkaa sabaatt ta’ee fi tasaa naannaa gandaatt kan ta’e ta’uun gargar baafamuu barbaachisa. Akkasitt ilaalamuu qaba ture malee dhimma lubbuu namaa dura dantaan malbulchaa buufamuu hin qabu ture. Baddannoon naannaa ABOn bilisomse kan lammi hunduu atoomaan waliin keessa jiraatan, turtee. Yakkamtoota akkasii yeroon qaanessuuf jira.Ta’iisi Baddannoo doo’ii bulchoota biyyatiin ABO moggeesuuf tolfame turee. ABOn akka Baddannoo gaheen lammoota gidduu fanfanamuun utuu hin jiraatin, mootummaa magaalaf filmaata halle haammataa gaggeessee ture. Haala yerosiitt fanfanammi utuu jiraateeyyuu nama hin komachiisu ture. Rakkina si’ana jiru dhaadannoo akaakileen saanii dhandhoonan “aramanee” jedhu